Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Champions League Ee Kooxaha AC Milan vs Arsenal. | Berberanews.com
Home CAYAARO Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Champions League Ee Kooxaha AC Milan vs...
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Champions League Ee Kooxaha AC Milan vs Arsenal.
(Berberanews Sport):- Alessandro Nesta ayaa ku soo laabtay tababarka buuxa ee kooxdiisa, lakiin lama filayo inuu ku bilaanban doono kulankaan, Alexandre Pato ayaa isna la mid ah. Kevin Prince-Boateng ayaa isaga laga yaabaa inuu ku soo bilowdo ka dib markii uu si fiican uga dhex muuqday tababarka.
Maxi Lopez ayaa isna la filayaa inuu ku bilaaban kulankaan iyadoo Robinho uu ku bilaaban doono qaab ciyareedka caadiga ah ee 4-3-1-2. Clarence Seedorf ama Urby Emanuelson ayaa midkood uu ku bilaaban doonaa khadka dhexe, lakiin ciyaaryahanka amaahda uga soo maqan Liverpool Alberto Aquilani ayaa weli dhaawac ku maqan mana ka qeyb qaadan doono kulanka caawa ee San Siro.
Mark van Bommel iyo Zlatan Ibrahimovic ayaa ganaax kaga maqnaa kulankii ugu danbeeyay e Serie A, balse waxa ay caawa safan doonaan kulankaan Arsenal. Stepen El Shaawary ayaa isna rajo ka qaba inuu helo kulankiisii ugu horeeyay ee Champions League halka Antonio Cassano uu weli maqan yahay.
Arsenal ayaa Italy u safartay iyadoo uu ka maqan yahay difacooda Per Mertesacker, kaasoo dhaawac canqowga ah uu soo gaadhay kulankii Sunderland. Kieran Gibbs ayaase si degdeg ah uga soo kabsaday dhaawacii hayay iyadoo Thomas Vermaelen uu ku soo laabtay booskiisa uu jecel yahay ee daafac dhexe. Aaron Ramsey ayaa keyd ku bilowday kulankii sabtida, waxaana ay u badan tahay inuu ku soo bilaaban doono kulanka caawa oo uu qaab ciyaareedka 4-3-3 ka bedeli doono Tomas Rosicky.
Abou Diaby ayaa dhaawac muruqa ah weli ku maqan, Carl Jenkinson ayaa isna dhabarka laga hayaa, halka Jack Wilshere uu isna weli dhaawac yahay.
Difaca Brazil Andre Santos ayaa muddo bil ah ay ugaga hadhan tahay inuu ka soo kabsado qaliinkii loogaga sameeyay canqowga. Thierry Henry ayay u badan tahay inuu ku bilaaban doonin kulankaan San Siro, waxaana la filayaa inuu soo galo qeybta labaad waa hadii uu taam yahay. Gervinho ayaa isna la fileynin inuu ciyaari doono iyadoo xulkiisa axadii rigoorayaal looga qaaday koobka qaramada Afrika.
AC MILAN: Abbiati; Abate, Mexes, Thiago Silva, Mesbah; Ambrosini, Van Bommel, Nocerino; Boateng; Ibrahimovic, Robinho
MAXAY KA YIRAAHDEEN MACALIMIINTA:
Massimiliano Allegri: “Ma jirto cabsi aan ka qabno kooxaha Ingariiska inkastoo guuldarro ay naga soo gaartay xilli ciyaareedyadii u danbeeyay. Sannadkii hore markii aan la ciyaarnay Tottenha waxaan qalad weyn ku sameynay kulankii Milan ka dhacay, lakiin kulankii labaad waxaan u qalanay inaan badino oo aan wareega xiga u gudubno . Arsenal si fiican ayay u ciyaareysaa, weerarkoodana waa halis”
Arsene Wenger: “Hadii aan aaminsanay inaan wax fursad ah heleynin kulankan waxaan iska joogi lahaa gurigeyga. Ma jecli inaan waqtiga iska dhumiyo. Waxaan aaminsanahay in waxyaabaha kuabada cagta xiiso u yeelo inay tahay inaad ku badin karto meel kasta. Waxaan soo bandhignay inaan ku badin karno meel kasta, kalsooni ayaana ku qabaa kooxdaan inaan sameyn karno. Waxaan qabaa inaan nahay koox fiican. Waa weerari doonaa sidoo kale iyagana waa ay ina soo weerari doonaan, sidaasi darteed waxa ay noqon doontaa kulan fiican”
Sideed is arag oo labo lugood ah iyo hal final (marka laga reebo Super Cup), ma jirto koox Talyaani ah oo Arsenal ka reebtay tartan knockout- ah.
Arsenal ayaa hal mar hore u la soo ciyaartay kooxda Milan Champions League, barbaro 0-0 ah ayay ku galeen gurigooda, waxaana ay 2-0 ku soo badiyeen San Siro.
Arsenal waxa ay badiyeen labadii kulan ee Champions League ee ay ku ciyaareen San Siro, iyagoo Inter ku garaacay 5-1, iyo Milan oo ay ku tumeen 2-0.
Milan ayaa ka badisay Arsenal 1994 Super Cup, waxa ay barbaro 0-0 ah ku galeen Highbury, waxaana ay 2-0 ku badiyeen San Siro.
Milan ayaa waxaa wareega 16ka Champions League ka reebtay seddexdii Champions League ee ugu danbeysay seddex koox oo Ingariis ah.
Milan ayaa badisay kaliya afar kulan 19kii kulan ee ugu danbeysay Champions League, guulaha waxa ay ka yimaadeen Auxerre oo ay labo jeer ka badiyeen, Viktoria Plzen iyo BATE Borisov. Inta soo hadhay 9 kulan ayay barbaro galeen lix kulana waa laga badiyay.
Zlatan Ibrahimovic ayaa shabaqa soo taabtay afartii kulan ee Champions League ee uu xilli ciyaareedkan saftay. Waxa uu ka dhaliyay labo gool booqashadiisa kaliya ee Emirates, isagoo Barcelona u jooga March 2010.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal Alex Song ayaa galay taakalada ugu badan ee ciyaaryahan uu ku sameeyay tartankaan Champions League waana 33 taakal.
Previous articleWefti ka socda Guddiga diiwaangelinta Ururrada Siyaasadda Somalililand oo qiimayn ku sameeyey Xafiisyada Ururrada ee Boorama
Next articleALNUUR FURNITURE oo Hormuud ka noqotay shirkadaha ka qayb-qaata horumarka bulshada